गुप्तांगको रौं बारे ७ भ्रम र यथार्थ – JanaSanchar.com
सरकारले कोरोना बिमा कार्यक्रम घोषणा गर्यो, बिमा कम्पनीले बन्द गरे
नेपालमा कोरोनाबाट दशौँ व्यक्तिको मृत्यु, संक्रमित संख्या २६ सय नाघ्यो
कृषिमा दलाल पुँजीवादी भाइरस : हरि रोका
चीन र भारतबीच शनिबार सिमा विवाद वार्ता हुँदै, अमेरिकाको मध्यस्तता अस्वीकार
जर्ज फ्लोइडको हत्या गर्ने प्रहरी अधिकारीकी पत्नीले मागिन् डिभोर्स
अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष ढकाल काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलाबाट गिरफतार : बिना शर्त रिहाइको लागि दश बिद्यार्थी संगठनको माग
कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि भन्दै सरकारद्वारा करिब १० अर्ब रुपैयाँ खर्च
आफ्नै निर्णयको खिल्ली उडाउँदै सरकारद्वारा विलासी भौतिक संरचना निर्माण र महँगा गाडी तथा फर्निचर खरिद
क्वारेन्टाइनस्थलमा नै दुई स्वास्थ्यकर्मी कुटिए, सिनियर अहेव आलमको टाउको फुट्यो
रक्सीले मातेर प्रहरी चौकीमाथि सामुहिक आक्रमण गरेको आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ, प्रहरी चौकीलाई सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा
संबाददाता : रमाकान्त बास्तोला	प्रकाशित मिति: (२०७४ माघ १८, बिहीबार) ०८:५८
भ्रम १: गुप्तांगको रौंले यौनजन्य रोगहरुबाट बचाउँछ
यदि रौं हटाउनका लागि रेजरको प्रयोग गरिन्छ भने एउटा रेजर २-३ पटकभन्दा बढि प्रयोग गर्नु हुँदैन । राम्रो क्वालिटीको रेजर प्रयोग गरौं । हेयर रिमुभिङ क्रिम प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि यो कुरा जाँचौं कि कतै त्यो क्रिमको कुनै एलर्जी त छैन ? बक्समा लेखिएका इन्स्ट्रक्सन पढौं । सैलुनमा गएर बिकिनी वाक्स पनि गराउन सकिन्छ । घरमा विकिनी वाक्स ट्राइ गरौं ।
यथार्थः यो बिल्कुल साँचो होइन । शिरको कपालको रंग जस्तो छ गुप्तांगको रौं पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने केही छैन । कुनै पनि रौंको रंगको सिधा सम्वन्ध मेलनिनसँग हुन्छ । गुप्तांगको रौं यसकारण गाढा हुन्छ कि यसमा मेलनिन अत्यधिक पाइन्छ ।
(२०७४ माघ १८, बिहीबार) ०८:५८ मा प्रकाशित
वडाध्यक्ष बरालमाथि पांच सय कुखुरा चोरी गरेको आरोप !
आर्ट ग्यालरीको भित्तामा टेपले टासिँएको सामान्य केराको मूल्य १ लाख २० हजार डलर !